ISpeed ​​Drive Auto Belay | Izinhlelo Zokukhuphuka Eziphelele Eziphelele
I-Speed ​​Drive Auto Belay
I-Perfect Descent Auto Belays yakhiwe ngesandla e-USA futhi incanyelwa umhlaba wonke ngabagibeli nabanikazi bejimu ngokufanayo. Njengomhlinzeki Osemthethweni we-Auto Belay we-International Federation of Sport Climbing, i-Perfect Descents iyasetshenziswa emncintiswaneni weNdebe Yomhlaba kanye ne-World Championship. Ukunikela ngokusebenza okuphezulu ngentengo ephezulu, ama-auto belays ethu abumbene, ahlala isikhathi eside, futhi alungele isabelomali, aziqhayisa ngezindleko eziphansi kakhulu zobunikazi emakethe. Izizinda Eziphelele zilungele izindawo zokuqwala amatshe, izindonga zokukhuphuka kwekamu, izikhungo zokuzilibazisa zaseyunivesithi, izifundo zezihibe ze-ninja, izikhungo zokuzijabulisa, ukuqeqeshwa kwezimboni, nokuningi!
Mayelana: I-Perfect Descent Speed ​​Drive Auto Belay
ISpeed ​​Drive ™ Auto Belay esuka ku-Perfect Descent Climbing Systems iyona yokuqala eyi-speed belay ne-Official Speed ​​Climbing Auto Belay ye-International Federation of Sport Climbing (IFSC). Ngejubane elisheshayo lokuhoxa emakethe ku-15 ft / s (4.6 m / s), i-Perfect Descent idlula umncintiswano kanye nabagibeli abashesha kakhulu emhlabeni. Imodeli ye-Speed ​​Drive ™ ihambisana nazo zonke izidingo ze-IFSC futhi inamandla amancane okudonsa umgibeli. Hhayi ukukhuphuka ngejubane kuphela, le modeli ilungele ukugcina ijubane nokuqina kanye nokuqeqesha abagibeli bezingqondo, ukuphatha imizila yokufudumala namandla, kanye nanoma imuphi umsebenzi lapho kudingeka khona ukuhlehlisa okusheshayo ukuqinisekisa ukuthi ukuxegisa akukaze kwenzeke kulayini.
KUBALULEKILE: ISpeed ​​Drive ™ eyi-53 ft (16.1 m) yi-auto belay evunyelwe ukusetshenziswa emizameni ye-IFSC Speed ​​Climbing World Record nasemicimbini yeNdebe Yomhlaba kanye neye-World Championship.
Isivinini sokubuyisa i-Lanyard: 15 ft / s (4.6 m / s)